Shina vita amin'ny alàlan'ny sary sokitra vita amin'ny vy Corten Steel Corten vy sy orinasa mpanamboatra | Piedra
Vovoka vita amin'ny vy Corten vita amin'ny baolina
Modely Tsia: MCS20
Ny Corten Steel Sculpture dia vita amin'ny vy takelaka vy, izay zato isan-jato novolavolain'ireo mpanakanto sary sokitra tsara mampiasa ny haitao vaovao. Fantatsika fa ny famitana sary vongana metaly hollow dia sarotra kokoa raha ampitahaina amin'ny sary sokitra vy hafa. Ity habeny ity dia manodidina ny 0.8m ary mety ho toy ny haingon-trano ivelany. Azo zahana amin'ny kirany isan-karazany ihany koa izy io. Raha liana ianao dia antsory aminay amin'ny fotoana rehetra. Safidio izahay ary ho faly be ianao amin'ny kalitaon'ity alika amin'ny alika vy ity.
Anarana sary sokitra: Saribakin'ny baolina kort Corten
Laharana modely: MCS50
Habe tombanana: 0.8m haavony
Technology: Handmade feno
Style: Sary sokitra Art
Famaritana ara-barotra: FOB, CIF, CFR
fampiharana: Haingon-trano, fanangonana sns
Departemanta 1.100% QC hijerena ny kalitaon'ny entana hahazoana antoka fa tsara ny kalitaony. Noho izany dia afaka mampanantena izahay fa ho afa-po amin'ny mpanjifa ny mpanjifa.
2. Isan-taona dia mamokatra vokatra vaovao an'arivony maro izahay hanamboarana ireo takian'ny tsena. Nahazo asa amin'ny ekipa matihanina izahay ka afaka manampy anao hamolavola zavatra rehetra tianao.
3. Na oviana na oviana ianao dia afaka miresaka amin'ny ivon-toeran'ny mpanjifantsika momba ny fepetra takiana aminao. Hanome anao hevitra sy torohevitra ara-potoana izahay!
4. Izahay dia manana karazana sary sokitra kanto ary afaka manolotra vokatra feno ho an'ny safidinao ianao, anisan'izany ny sary sokitra stainless vy, sary sokitra corten, varahina halimo na varahina, sary sokitra fiberglass sns.
5. Izahay dia manaiky lamina kely na làlan-kizofana ary avy eo dia afaka manandrana ny tsenanao aloha. Ny MOQ dia singa iray.
Ny valin-kafatra ho an'ny mpanjifa
Ity sary sokitra vy vita amin'ny zavakanto ity dia natao ho an'ny firavaka ahitra. Rehefa nahazo ny entanay ny mpanjifanay ary tena afa-po amin'izany izy. Ny tena asa tanana sy ny famolavolana tena tsara dia tsy maintsy ho lasa sary sokitra metaly mahaliana eto.
Inona ny traikefanao amin'ny famokarana?
Mifehy mafy ny fitakiana ny fenitra avo lenta izahay. Efa namoaka sary sokitra maro ho an'ny mpanjifanay any ivelany izahay nandritra ny taona maro.
Manolotra ny serivisy famolavolana ho an'ny mpanjifa ve ianao?
Ankehitriny izahay dia nanangana ekipa mpamorona varavarankely marika an-trano, ary tsy ho ela dia hanana ekipa mpamorona serivisy iraisam-pirenena manokana.
Ary ny serivisinao aorian'ny fivarotana?
Izahay dia handray ny andraikitra feno amin'ny olana kalitaon'ny entana. Ka raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa aminay fa hamaha ara-potoana izahay.
Previous: Sarivongana voajanahary voajanahary Rusty Corten
Manaraka: Sary sokitra stainless vy volamena
Famolavolana vy vita amin'ny vy lehibe Corten toy ny ...
Zavamaniry mahatohitra ririnina zaridaina azo antoka
Hollowed Out Football Shape Corten Steel Sculpt ...
Custom Round Design Corten Steel Garden Sculptu ...
Mahafinaritra Metal Flower Design Corten Steel Stat ...
Zavakanto Volavolan-javaboary maoderina kortiravine mody